Wasiirka Diinta iyo Owqaafta oo u hambalyeeyay wiilka Soomaaliyeed ee ku guuleystay tartanka xifdinta Qur’aamka – Radio Muqdisho
Wasiirka Diinta iyo Owqaafta ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya C/qaadir Sheekh Cali “Baqdaadi” ayaa u hambalyeeyay wiilka Soomaaliyeed ee ku guuleystay tartanka caalamiga ah ee xifdinta Qur’aanka Kariimka oo lagu qabtay dalka Kuweyt.
Wasiirka ayaa bogaadin iyo hambalyo farxadi ku dheehantahay u diray C/risaaq C/laahi Cali oo ah wiilka Soomaaliyeed ee ku guuleystay tartanka xifdinta Quraanka kariimka ee lagu qabtay dalka Kuweyt, isagoo waalidiinta wiilkaasi ugu hambalyeeyay sida ay ugu dadaaleen wiilkooda.
‘Waxaan aad iyo aad mahad ugu celinayaa wiilka Soomaaliyeed ee wasaradda Diinta iyo Owqaaftu ay Soomaaliya ka dirtay ee guushaan noo soo hooyay, waxaan leeyahay adduun iyo aakharaba ilaaheey kor hakuu qaado” ayuu yiri Wasiirka Diinta iyo Owqaafta C/qaadir Sh. Cali Baqdaadi.
Wasiirka ayaa ku boorriyay waalidiinta Soomaaliyeed iney ku dadaalaan waxbaridda caruurtooda, isagoo ammaan iyo ducaba u jeediyay waalidiinta C/risaaq C/lahi Cali.
Su'aal ama fikir soo weydii wasiirka wabarashada oo marti ku ah barnaamijka kulanka Todobaadka